Diyaaradda Turkmenistan waxay amarka ugu horreysa siisaa Airbus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Turkmenistan waxay amarka ugu horreysa siisaa Airbus
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Faransiiska • Investments • News • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkmenistan • Wararka kala duwan
Shirkadda Duulimaadyada ee Turkmenistan waxay noqotay macaamiil cusub oo Airbus ah iyada oo lagu dalbanayo labo diyaaradood oo ah A330-200
Shirkadda Duulimaadyada ee Turkmenistan ayaa amar ku bixisay laba diyaaradood oo nooca A330-200 ah oo loo beddelay Rakaabka-Freighter (P2F), iyadoo noqotay macmiil cusub oo Airbus ah. Amarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee diyaarad Airbus lagu iibiyo Turkmenistan. A330-200P2F ayaa u sahli doonta shirkadda diyaaradda inay sii horumariso oo ay kobciso shabakadeeda marinka xamuulka caalamiga ah. Soo dejinta diyaaradda ayaa la qorsheeyay sannadka 2022, taasoo ka dhigaysa shirkadda Turkmenistan Airlines shirkaddii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka shaqeysa Bartamaha Aasiya.
Rakaabka A330 ee badeecada badeecada xamuulka ayaa la bilaabay sanadkii 2012 taasoo keentay in dib loogu soo celiyo waqtigii dhamaadka A330P2F noocii ugu dambeeyay ee 2017. Barnaamijka A330P2F waa iskaashi u dhexeeya ST Engineering Aerospace, Airbus iyo iskaashigooda wadajirka ah Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW). ST Engineering wuxuu lahaa barnaamijka iyo hogaaminta farsamada wajiga horumarinta injineernimada, halka EFW ay haysato iyo milkiilaha dhamaan Shahaadooyinka Nooca Dheeraadka ah (STCs) ee barnaamijyada isbadalka ee Airbus ee hada ay kujiraan A330P2F waxayna hogaamineysaa wajiga warshadaha iyo suuqgeynta barnaamijyadan. Airbus waxay ku biirisaa barnaamijka xogta soo saaraha iyo taageerada shahaadada.
Barnaamijka A330P2F wuxuu leeyahay laba nooc - A330-200P2F iyo A330-300P2F. A330-200P2F waa xalka ugu fiican ee xamuulka cufnaanta sare iyo waxqabadka baaxadda dheer. Diyaaraddu waxay qaadi kartaa ilaa 61 tan oo culeys ah in ka badan 7700 km, iyadoo bixinaysa xamuul badan iyo qiimo ka yar-tan-tan noocyada kale ee diyaaradaha xamuulka ee la heli karo oo leh isku mid ah. Intaa waxaa dheer, diyaaraddu waxay ku darsantay tiknoolajiyad casri ah, oo ay ku jiraan kontaroolada duullimaadyada duullimaadka ah, oo u siinaya shirkadaha duulimaadyada faa'iidooyin dheeri ah oo shaqo iyo dhaqaale.